7 Jaamacadaha ugu Yar ee ugu sareeya Kanada 2022
7 Jaamacadaha Ugu Yar Yar Kanada
Halkan waxaa ku yaal liistada 7-da jaamacadood ee ugu yar Kanada dhexdeeda xilligan iyo qaar ka mid ah waxyaabaha cajiibka ah ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga.
Machadyada tacliinta sare, sida jaamacadda, oo loogu yeero "yar" macnaheedu sinaba uma ahan in tayada waxbarashada dugsigu ay liidato ama aan wax nal xun ah ku saarin hay'adda.
"Yar" macnaheedu waa inuusan ku weyneyn aagga bannaan oo uusan ku bixin barnaamijyo shahaadooyin badan sida jaamacadaha kale ee waaweyn.
Jaamacadahan yar yar ee Kanada sidoo kale waxay bixiyaan waxbarasho heer caalami ah, waxay bixiyaan aqoonyahano waaweyn oo kaladuwan shahaadooyinkoodana si isku mid ah ayaa looga aqoonsan yahay adduunka. Waxay sidoo kale bixiyaan labadaba barnaamijyada shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta inta badan dhinacyada waaweyn, si ka duwan jaamacadaha waaweyn ee bixiya barnaamij kasta oo weyn iyo mid yarba dhammaan dhinacyada.
Marka, taasi waa sida loo kala saaro "jaamacadaha" yar iyo maadaama aysan caan ahayn, dad badan ma aadaan halkaas, sidaas darteed, ma laha dad aad u tiro badan.
Tirada guud ee ardayda dhigata jaamacadahan yar yar ee Kanada waxay u dhexeeyaan 2000 ilaa 5000 celcelis ahaan. Tan awgeed, dugsiyadan sidoo kale waxay helaan maalgelin yar sanadle maadaama aysan waxbadan qaban kadib; laakiin waxay si wanaagsan ugu qalabaysan yihiin oo keliya waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inay arkaan ardaydeeda.
Ha u oggolaan ereyga "yar" ee lala isticmaalay jaamacadahaan inay kaa dhigto inaad yaso iyaga oo laga yaabo inaad ku qiimeyso iyaga oo aan awood u lahayn, qaar ka mid ah runti waa hay'ado heer sare ah.
Tusaale ahaan, Jaamacadda Bishop waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada laakiin labadii sano ee la soo dhaafay waxay ka mid tahay tobanka jaamacadood ee ugu sarreeya Kanada.
Marka, haddii aad ku raaxeysato meelo ay dad badani ku nool yihiin oo aad rabto inaad dhigato hay'ad sare oo Kanada ah markaa waa inaad tixgelisaa inaad dalbato mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada.
Jaamacadahani waxay si siman u aqbalaan ardayda caalamiga ah, illaa inta aad ka buuxineysid shuruudaha gelitaanka. Faa'iidada kale ee ay leeyihiin jaamacadaha yar-yar ayaa ah inaysan aheyn kuwo tartan badan leh.
Waxay si fudud ugu oggolaadaan ardayda, oo ay ku jiraan kuwa caalamiga ah, mid ka mid ah barnaamijyada waxbarasho ee la heli karo. Shuruudahoodu ma ahan kuwa adag tanina waa sababta oo ah ma ahan kuwo caan ah sidaa darteed dadka badankood xitaa ma oga inay jiraan iyo taa badalkeed waxay waxbadan ka codsadaan iskuuladan waaweyn ee caanka ah. Marka waxay ogolaadeen in shuruudahooda si fudud loo gaaro, markaa dad badan ayaa laga yaabaa inay soo galaan.
Hoos ka eeg liistada jaamacadahaas Kanada ku yaal ee lagu tiriyo jaamacadaha ugu yar dalka oo la siiyay iyadoo ay la socdaan faahfaahin si ay kaaga caawiyaan inaad wax badan ka ogaato dugsiyada.
Midkasta oo xiisahaaga qabta oo leh barnaamijka aad dooratay waad sii wadan kartaa inaad dalbato ogolaanshaha.
Jaamacadda Prince Edward Island (UPEI)
Jaamacadda Waqooyiga British Columbia (UNBC)
Jaamacadda Ummadda ee Koowaad ee Kanada (FNUniv)
Jaamacadda St. Francis Xavier
Jaamacada Mount Allison
Kuwa soo socdaa waa 7-da jaamacadood ee ugu yar Kanada dhexdeeda halkaas oo aad ku sii wadi kartid barnaamijka aad ugu jeceshahay barashada. Waa inaad ogaataa inaysan ku jirin nidaam gaar ah;
Jaamacada Francis Xavier
Waxaa la aasaasay 1843 waxayna ku taalaa Sherbrooke, Quebec, Jaamacadda Bishobada waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada oo leh ku dhowaad 2,867 arday oo ka kooban labadaba ardayda jaamacadda iyo kuwa qalin-jabiya.
Haa, kani waa barxad yar oo tacliin sare ah waxayna siisaa barnaamijyo kala duwan oo shahaadada qalin-jabinta ah oo ay ku jiraan MA iyo M.Ed xagga waxbarashada iyo M.Sc ee sayniska kombiyuutarka iyo fiisigiska.
Qaybta shahaadada koowaad waxay bixisaa barnaamijyo kala duwan iyada oo loo marayo shanta qaybood ee tacliinta; Dugsiga Ganacsiga Williams, Qeybta Aadanaha, Qeybta Cilmiga Dabiiciga ah iyo Xisaabta, Qeybta Cilmiga Bulshada, iyo Iskuulka Waxbarashada.
Jaamacadu waxay aqbashaa ardayda caalamiga ah barnaamijyadeeda oo dhan waxayna ku barataa dhamaan fasaladeeda luuqada Ingiriiska.
Iskuulku wuxuu sifiican ugu qalabeysan yahay tas-hiilaadka iyo macalimiinta caanka ah ee waligood diyaar u ah inay gacan ka geystaan ​​horumarinta kartidaada, abuurista fursado waxbarida gacmaha, iyo ku siinta qalab aad ubaahantahay inaad ku guuleysato nolosha.
The Jaamacadda Prince Edward Island waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada oo la aasaasay 1860 waxayna soo martay magacyo qaar sanadihii la soo dhaafay, Prince of Wales College iyo Saint Dustan's University waxay ahaayeen wixii loogu yeeri jiray. Kahor intaan loo magacaabin UPEI 1969, waxay ku taal Charlottetown, Jasiiradda Prince Edward, Kanada, iyo jaamacadda keliya ee gobolka ka jirta.
In kasta oo mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada, haddana gurigan sare ee sare ee tacliinta sare wuxuu bixiyaa barnaamijyo badan oo kala duwan oo isugu jira shahaadada koowaad, qalin-jabinta, iyo shahaadada takhasuska. UPEI waxay leedahay sideed kuliyadood iyo hal Iskuul oo ah xisaabta iyo sayniska kombiyuutarka oo ardayda siiya shahaadooyinkan. Sideeda kulliyadood ayaa kala ah Arts, Education, Veterinary Medicine, Nursing, Science, Science Design, Sustainable Design, Business, and Graduate Studies.
UPEI waxay ka aqbashaa ardayda qeybaha kala duwan ee nolosha inay ku amarto waxbarashadeeda tayada leh isla markaana ay naftooda ku xoojiso xirfado ka dhigaya kuwo waxtar u leh nolosha dugsiga kadib.
Iskuulkani la mid maaha kan Jaamacadda British Columbia, laakiin labaduba waxay ku yaalliin isla gobolka.
In kasta oo laga helay isla gobolka mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya Kanada, UBC, the Jaamacadda Waqooyiga Ingiriiska ee Columbia maahan mid caan ah waxaana sidoo kale lagu qoraa mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada.
UNBC waa xarun cilmi baaris deg deg ah oo ku taal British Columbia waxaana la aasaasay 1990 waxayna had iyo jeer ku jirtaa, lambarka koowaad ee 2015 iyo 2016 siday u kala horreeyaan, oo ka mid ah jaamacadaha ugu yar ee ugu yar Kanada. Iskuulkani waa yar yahay laakiin wuxuu bixiyaa barnaamijyo badan oo shahaadooyin ah shahaadada koowaad, masters-ka iyo ardayda dhakhaatiirta.
Kulliyaduhu waa Farshaxanka, Ganacsiga, Waxbarashada, Sayniska Caafimaadka, Sayniska, Sayniska la adeegsaday, Kalkaalinta, Qorshaynta, Shaqada Bulshada, iyo Daraasaadka Qalinjabinta. Waxa kale oo jira xarumo casri ah oo loogu talagalay in lagu fududeeyo khibrada waxbarasho ee ardayga laguna siiyo xirfado wax ku ool ah.
Jaamacadda Ummadda ee ugu horreysa Kanada waa jaamacadda ugu yar Kanada si waali ah. Iskuulka waxaa la aasaasay 1976 wuxuuna ku yaal Saskatchewan, Canada.
FNUniv runti waa kuliyad federaal ah oo jaamacadeed oo Regina ah shahaadooyinka laga helay FNUniv waxaa bixiya Jaamacadda Regina.
Jaamacadda First Nations University ee Kanada waxay leedahay saddex xarumood oo kala ah; Regina Campus oo ku taal Jaamacadda Regina, Xarunta Saskatoon oo ku taal xerada Machadka Teknolojiyada Saskatchewan, iyo ugu dambayntii Xarunta Waqooyiga ee ku taal Prince Albert.
Jaamacadu waxay bixisaa shahaadada koowaad iyo qalinjabinta barnaamijyada tacliinta ee Cilmiga Bulshada, Bani'aadamka, Sayniska iyo Ganacsiga iyo barnaamijyo fara badan oo diirada lagu saaray dhaqamada dadka asaliga ah. Jaamacadda First Nations University ee Kanada waxay higsaneysaa inay yeelato saameyn isbadal ah oo isdaba joog ah iyada oo loo marayo waxbarasho ku saleysan aasaaska Aqoonta Asaliga ah.
Jaamacadda Acadia waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada oo la aasaasay 1838 waxayna ku taalaa Wolfville, Nova Scotia, Canada oo ay dhigtaan in ka yar 4000 oo arday barnaamijyo shahaadooyin kala duwan ah.
Jaamacadu waxay leedahay barnaamijyo badan oo shahaadada koowaad ah iyo 17 barnaamijyo heer jaamacadeed oo adag sidoo kale. Dhammaan barnaamijyadan shahaadada waxaa lagu bixiyaa kulliyadaha Farshaxanka, Sayniska saafiga ah iyo sayniska, Daraasadaha Xirfadeed, iyo Fiqiga.
In kasta oo uu yahay jaamacad yar, Acadia wey weyn tahay markay tahay hal-abuurnimada wuxuuna hormuud u ahaa adeegsiga teknolojiyada xisaabinta moobaylka ee deegaanka dugsiga sare kadib.
Iskuulku wuxuu aqbalaa ardayda dhammaan qaybaha nolosha si loogu amro waxbarashadeeda tayada leh iyo ka caawinta ardayda inay horumariyaan wada shaqeynta iyo xirfadaha hoggaaminta.
Mid kale oo ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada oo ku yaal Antigonish, Nova Scotia oo la aasaasay 1853 oo ay ku nool yihiin dad ka yar 400 oo arday oo ku jira barnaamijyada shahaadada koowaad iyo kuwa qalin-jabinta.
Jaamacadda St. Francis Xavier waxay bixisaa barnaamijyo tacliimeed oo ballaaran oo loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo kuwa qalin-jabinta iyada oo loo marayo kulliyadeeda Arts, Science, Education, Gerald Schwartz School of Business, iyo daraasadaha qalin-jabinta.
Jaamacaddu waxay aqbashaa ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka socda dhammaan qaybaha nolosha inay ka garab shaqeeyaan macallimiinteeda caanka ah, macallimiinta, iyo cilmi-baarayaasha waxayna ku raaxaystaan ​​khibrad waxbarasho oo gaar ah. Qalabyada ugu sareeya ayaa sidoo kale loo heli karaa ardayda inay u adeegsadaan inay ku horumariyaan iyaga xagga ficil ahaaneed isla markaana uga tagaan xirfado u noqon doona kuwo waxtar u leh noloshooda dugsiga ka dib.
Sidii aan hore u soo sheegay, jaamacad yar ma dhigayso mid "carrab la '" iyo Jaamacada Mount Allison taas ayaa cadaynaysa.
Jaamacaddan ayaa sannadihii 29 ee la soo dhaafay ku xustay 21 jeer mid ka mid ah jaamacadaha ugu horreeya ee tacliinta sare ee Kanada, haddana sidoo kale waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu yar Kanada sidoo kale. Tani waa rikoor aysan la mid aheyn jaamacadaha kale ee Kanada.
Jaamacadu waxay ku taalaa Sackville, New Brunswick, waxaana la aasaasay 1839 mana aysan ka waaban inay siiso waxbarasho aad u fiican ardayda adduunka oo idil.
Jaamacadda Mount Allison waxay bixisaa labadaba barnaamijyo tacliimeed oo kala duwan oo ah shahaadada koowaad iyo shahaadada mastarka iyada oo loo marayo farshaxankeeda, sayniska bulshada, iyo kulliyadaha sayniska.
Jaamacadda Mount Allison waxay u heellan tahay inay sii wado ardayda oo ay siiso waayo-aragnimada waxbarasho ee ugu wanaagsan uguna hormariso ardayda si ay u noqdaan hoggaamiyeyaal ugana qayb qaataan si togan dhinacyada ay ka tirsan yihiin.
Tani waxay soo afjartay maqaalkan ku saabsan jaamacadaha ugu yar Kanada; xiriiriyeyaasha lagama maarmaanka u ah ayaa la bixiyay si loo yareeyo raadintaada oo looga caawiyo inaad si fudud u codsato doorashadaada. Haddii ay jiraan wax faahfaahin ah oo aan caddayn inta lagu jiro codsigaaga ha ka waaban inaad la xiriirto dugsiga wixii macluumaad dheeraad ah iyo caddayn ah.
Jaamacadahan ku yaal Kanada inkasta oo ay yar yihiin oo aan la jeclayn, waxay leeyihiin nooc darajo ah, guulo, ama tabarucaad oo dunidu ka faa'iideysatay.
Mararka qaarkood, arday ahaan, waxaad sidoo kale u istaagtaa inaad wax badan ka kasbato iskuul ka dadkiisu yar yahay kan dadka ku badan, maaddaama ilaha dugsigu gaadhayo qof walba, helitaanka macallinkaaguna way fududaanaysaa sidoo kale.
Jaamacadaha ugu yar Kanada
Previous Post:Iskuulada Caafimaadka ee ugu Fiican Texas Faahfaahintooda
Post Next:21 Koorsooyinka Kulliyadda Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Abaalmarinta